Maqa balleessiin ummataa fi naannoo Oromiyaarratti baname hataattamaan dhaabbachuu qaba- obbo Admaasuu Daamxoo – Fana Broadcasting Corporate
Maqa balleessiin ummataa fi naannoo Oromiyaarratti baname hataattamaan dhaabbachuu qaba- obbo Admaasuu Daamxoo
Finfinnee, Bitootessa 7,2011(FBC)- Maqa balleessii fi ololli ummata, naannoo fi mootummaa Oromiyaarratti baname hataattamaan akka dhaabbatu mootummaan naannoo Oromiyaa akeekkachiise.
Hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoon ibsa haala yeroorratti har’a waaree booda laataniin akka beeksisanitti, ummata Oromoo, naannoo fi mootummaa naannichaarratti ololli diigumsaa banameera.
Diigumsi kunis ta’e jedhamee Oromoon biyya bulchuu hin danda’uun kan afaarfamaa jirudha jedhaniiru.
Kana keessas burjaajjii fi jaatanii uumudhaan, gaaffileen ummanni Oromoo barootaf kaasaa ture deebii akka hin arganne carraaqqii taasifamudha jedhaniiru hoggantichi.
Mootummaan naannoo Oromiyaa saba, sablammootaa fi ummattoota biyyattii biroo waliin jijjiirrama amma Ityoophiyaatti dhufe akkuma fide; jijjiirramichi ni ce’a.
Ni gufataan kan shakku yoo jiraate, sadarkaan qabsoo Ummata Oromoo fi saboota obbolaa biroo irra ga’e kan hin hubannee fi qaama yeroon irra darbedha jedhaniiru obbo Admaasuu Daamxon.
Mootummaan dirree demokraasii bal’isuuf hojii hojjetu akka laafinaatti ilaalanii oduu sobaatin ta’e jedhanii ummata Oromoo fi saboota biroo walitti buusuuf yaalun, olaantummaa seeratiin bakkatti deebi’as jedhan obbo Admaasuun.
Maqa balleessiin ummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti aggaammamu kamuu dhaabbachuu akka qabu dhaamanii, hin ta’u taanan garuu olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama ta’aan akeekaniiru.
Mootummaan dirree fi mirga demokraasii wayita bal’isaa jirutti, aggaammiin xin sammuu Oromoo miidhuuf yaalamu kamuu akka laayyotti hin ilaallamu; callisaanis bira hin darbamu jedhan hoggantichi.
Mootummaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetu, shiratti dabsanii maqa balleessiif fayyadamuun, ummata Oromoo saba birootin walitti buusuuf gidiraa xaxuunis kana caalaa hin obsamu jedhaiirun.
Mootummaan olaantummaa seeraa yammuu kabachiisu ta’e jedhamee saba biraa akka buqqisuutti lakkaa’un seera qabeessaa miti; duudhaa hammattummaa Oromootis hin ibsu.
Mootummaan hojii seermaleessummaarratti tarkaanfii fudhatu, ummata Oromoo waliin waltumsee ammallee itti fufa.
Ergaawwan hoggansi naannichaa dabarsu cicciranii walitti suphuudhan karaa hin taanetti hiikanii fayyadamuun olola diigumsaaf afaarfamu.
Kun haala yeroo ilaalcha keessa bifa hin galchineen jijjiirrama bu’uura ummattummaa qabuu fi hin gufanne gufachiisuuf yaadudha; kanarra dhugaadhan waltumsuu wayyaan dhaamaniiru.
Maqa balleessiin ummata, mootummaa fi naannoo Oromiyaarratti baname kamuu hartaattamaan hin dhaabbatu taanan tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta’as jedhan obbo Admaasuun.
Ummanni Oromoo fi Ityoophiyaa olola deemaa jiruun shakkii kamuu keessa seenuu hin qabu.
Jijjiirramichi kan isaan tumsame waan ta’eef, mootummaa jijjiirramaasaa dhaggeeffachaa qabsoo dirree demokraasii bal’isuu eegalame obsaan karaa nagayaatin itti fufuun barbaachisaadha jedhaniiru.
Ummanni naannichaa farra demokraasummaa raasee akkuma jijjiirrama kana fide, tumsasaa itti fufuu qabas jedhan.